Xirfada Qiimeynta Arin
Qiimeyn arin waa awoodista inaad wax kaga fikirtid si cad oo qumman iyo fahmida suurtagalnimada isku xirnaanshaha aragtiyada. Mowduucaan qiimeynta arin wuxuu soo maray doodo badan iyo fikrat isdhaafsi tan iyo bilowgiisi, walina wuu ahaan doonaa mowduuc aad loogaga hadlo mustaqbalka.
Waxaa lagu qeexi karaa ‘Qiimeyn Arin’ awoodista ka qayb qaadashada aragti isdhaafsi iyo fikrado madax-bannaan.
Hadii aan gudaha u galno nuxurka xirfada qiimeynta arin waxaa lagaaga bahan yahay inaad isticmaasho kartidaada raadinta sababta, waana ahaanshaha qof ku firfircoon fahanka wuxuun aqoon u leheen, aadan noqon dhagweyn.
Xirfadaha qiimeynta arin waxaa ka mid ah su’aal ka keenida talooyinka iyo aqbaaraadka, adigoon iska qaadaneyn wixii dhagtaada ku dhaca intaadan hubsan.
Qofka leh xirfadan qiimeynta arin markuu wajahayo go’an qaadasho wuxuu tilmaamaa maxay iyo qofkee ee arinta quseyso kadibna wuu falanqeeyaa arinta si uu qaato go’aan ku saleysan xogagaalnimo, mana gaaro go’aan ku saleysan dareen ama mal’awaal.
Qiimeynta arin waa u kuurgalka dhinacyada kala duwan ee arinta sameyn ku lahaan karto si aad u qaadato go’aanka ugu haboon adigoo tixgalinaayo marxalada markaas aad ku jirto.